माउर्ड गोमांस र बन्दकोबी सुस्त कुकर रेसिपी (भिडियो) - व्यंजनहरु
तत्काल भाँडो को लागी प्राकृतिक रिलीज के हो
के साइड डिशहरू कोलार्ड सागका साथ जान्छ
क्यान्टर मटरको साथ अंग्रेजी मटर सलाद
कसरी स्थिर पनी बनाउने
माउर्ड गोमांस र बन्दकोबी सुस्त कुकर रेसिपी (भिडियो)
यो माउर्ड गोमांस र गोभी स्लो कुकर रेसिपी मकैमा पकाएको मासुको सबै स्वादिष्टतालाई खानामा खाना बनाउँदछ जुन आफै पकाउँदछ। टेंडर कर्न्डेटेड गोमांस र गोभी, गाजर, र आलु सबै क्रक पटमा पूर्णतामा पकाइएको तरलले खानाको लागि बनाउँदछ।
सेन्ट पैट्रिकको दिन वा बर्षको कुनै पनि दिनमा राम्रो भाग्यको स्ट्रोकको बारेमा कुरा गर्नुहोस्!
माउर्ड गोमांस र बन्दकोबीका लागि उत्तम रेसिपी!
मलाई अक्सर सोधिन्छ 'मकैको गोभी र गोभीको लागि उत्तम विधि के हो?' र मैले स्वीकार्नुपर्दछ कि म यस ढिलो कुकर रेसिपीको आंशिक हुँ!
यो क्रोक पट कार्डेटेड गोमांस र बन्दकोबी रेसिपी सबै भन्दा राम्रो पकाएको छ Q क्यूटी ढिलो कुकर (वा ठूलो) यसले वास्तवमा क्रक भर्छ। तपाईंको आलुहरू केही घण्टा पकाउने प्रक्रियामा थप्नुहोस्, जसले गर्दा उनीहरूले लगभग 6-6 घण्टासम्म पकाउँदछ, यसले तिनीहरूलाई मिश्री हुनबाट बचाउनेछ। गोभी जोड्नुहोस् २ घण्टा पहिले तपाईंले खाना सेवा गर्ने योजना बनाउनुभयो।
यदि तपाईंले पहिले कहिल्यै माउन्टेड गाईको मासु बनाउनु भएको छैन भने, यो वास्तवमै बनाउनको लागि सजिलो छ तर यो कुरा ध्यानमा राख्नु महत्त्वपूर्ण छ, मकिएको गोमांस (र सामान्यमा गोमांस ब्रिस्केट) मासुको कडा कटौती हो जबसम्म यो राम्रो पकाइदैन। यदि यो गाह्रो छ भने, यो पर्याप्त लामो पकाइएको छैन, यो ढिलो कुकरमा छोड्नुहोस् र यसलाई केही अधिक समय दिनुहोस्।
काट्नु अघि तपाईं जहिले पनि तपाईंको पोखिएको गोमांसलाई आराम गर्न अनुमति दिन चाहानुहुन्छ किनकि यो मासुको ठूलो कटौतीको रहस्य हो। एक चोटि आराम गरीयो, अन्न बिरुवा काट मसालेको गोरुको परिणाम स्वरूप जुसीर, काँटा टेंडर र अधिक स्वादपूर्ण हुन्छ।
त्यहाँ केहि साँच्चिकै महत्त्वपूर्ण सल्लाहहरू छन् जुन तपाईंलाई कुनै ब्रिस्केट रेसिपी बनाउँदा सचेत हुनुपर्दछ (यस क्रोक पटको मकसरा गोमांस पकाउने विधि सहित)।
यसलाई टेन्डर बनाउन कसरी पोख्ने गोमांस
कम र ढिलो: ब्रिस्केट मासुको कडा कटौती हो र सबै भन्दा राम्रो नतिजा प्राप्त गर्न, यसलाई कम र ढिलो पकाउनु पर्छ। यस नुस्खामा, म ढिलो कुकर प्रयोग गर्छु र कम सेटिंग प्रयोग गर्ने कुरामा निश्चित छु।
यो समय दिनुहोस्: यो 'ढिलो' मा फिर्ता जान्छ ... यो नुस्खा 8-१० घण्टाको लागि कल गर्दछ र मेरो सामान्यतया १० को नजीक लिन्छ। यदि तपाइँको मसालेको मासु कडा छ भने, त्यहाँ राम्रो मौका छ जुन यसले लामो पकाएको थिएन।
तपाईंको मासु आराम गर्नुहोस्: धेरै जसो मासुको रूपमा, यसलाई काट्नु अघि केही मिनेट आराम गर्न दिनुहोस्।
अन्नमा काट्नुहोस्: ब्रिस्केटमा लामो फाइबर स्ट्रेंडहरू छन् त्यसैले धानको वरिपरि काट्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। वास्तवमा, यो यस नुस्खाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अंशहरू मध्ये एक हो !!
मसाले गोलेको मासुमा के जान्छ?
गोमांस गोमांस ब्रिस्केट हो जुन उपचार गरीएको छ र ब्राइन गरिएको छ। बेच्ने बित्तिकै यो पहिले नै मौसमी वा मौसमी प्याकेटको साथ आउँदछ। मौसमीले राम्रा सुगन्धित मसलाहरू समावेश गर्दछ जस्तै सम्पूर्ण एलस्पिस, कालीमिर्च, सरसको दाना, धनिया केहि नामको लागि। यदि तपाइँको मसालेको मासुमा मसला छैन भने तपाईले केहि चम्मच थप्न सक्नुहुन्छ अचार अचार , केही काली मिर्च र एक तेज पात। तिनीहरूलाई चीजलोकमा बन्डल गर्नुहोस् र ढिलो कुकरमा टास गर्नुहोस्।
सेन्ट प्याट्रिक डे कोर्डेड गोमांस र गोभी जस्तो सजिलो स्लो कुकर रेसिपीको मजा लिनको लागि उत्तम समय हो। एउटा क्रक भाँडो प्रयोग गर्दा यो खाना लगभग सजिलो हुन्छ!
यो स्लो कुकर कर्न्डेड गोमांस र बन्दकोबी रेसिपी एक प्रकारको स्वादिष्ट खाना बनाउँदछ जुन तपाईंको परिवारले मन पराउनेछ! यो पहिले देखि नै एक पूर्ण भोजन भएकोले, हामी प्राय जसो यो साथ सेवा गर्छौं Min० मिनेट डिनर रोलहरू वा सजिलो घरेलु छाछ बिस्कुट र एक साधारण साइड सलाद।
मलाई लाग्छ तपाईं यस बर्ष गोल बनाउन चाहानुहुन्छ! यो सजिलो माउन्टेड गोमांस र बन्दकोबी रेसिपीले एक मा सबैले पूरा खाना समावेश गर्दछ, कोमल कोर्डे गोमांस, आलु, मीठो गाजर र बन्दकोबी।
थप आइरिश मनपर्नेहरू
भेडा स्ट्यु (आइरिश स्ट्यू) - धेरै धनी र स्वादपूर्ण!
कसरी पोख्ने गोमांस (स्टोभ शीर्ष) - स्टोभ शीर्ष संस्करण!
आयरिश सोडा रोटी - उत्तम पक्ष, सूप र स्ट्युहरूको लागि उत्कृष्ट!
कोल्कननन रेसिपी (बन्दकोबी र आलु) - अन्तिम आराम खाना!
मेरो मनपर्ने रुबेन स्यान्डविच - होममेड उत्तम हो!
स्लो कुकर कर्न्डर्ड गोमांस र बन्दकोबी
तयारी समय१० मिनेट कुक समय। घण्टा कुल समय। घण्टा १० मिनेट सर्भिंगहरू6 सर्विंग्स लेखकहोली एन यो कर्न्डेड गोमांस र गोभी स्लो कुकर रेसिपीले माउन्डेको मासुको सबै स्वादिष्टतालाई खानामा प्याक गर्दछ जुन आफै पकाउँदछ। सेन्ट पैट्रिकको दिन वा बर्षको कुनै पनि दिनमा राम्रो भाग्यको स्ट्रोकको बारेमा कुरा गर्नुहोस्!
प्रिन्ट गर्नुहोस् पिन
▢१ गोरुको मासु ब्रिस्केट .-। पाउन्ड
▢। लौंग लसुन
▢दुई बे पातहरू
▢२ ½ -। कप पानी
▢दुई पाउन्ड आलु खुली र क्वार्टर
▢दुई ठूलो गाजर काटिएको
▢१ बन्दकोबीको सानो टाउको पाges्ग्रा मा काट
प्याजलाई ठूलो भागमा काट्नुहोस् र6क्युटि ढिला कुकरको तल राख्नुहोस्। माउर्ड गोमांस र मसाला प्याकेटको साथ शीर्ष।
ढिलो कुकरमा पानी हाल्नुहोस् जब सम्म यो केवल माउन्टेड गोमांसलाई कभर गर्दैन। लसुन र बे पातहरू थप्नुहोस्।
कम 8-10 घण्टा मा कुक।
प्रारम्भिक hours घण्टा पछि, ढिलो कुकरमा आलु र गाजर थप्नुहोस्।
सेवा प्रदान गर्नु भन्दा दुई घण्टा पहिले, ढिलो कुकरमा गोभी वेजहरू थप्नुहोस्।
ढिलो कुकरबाट कर्न्डेड गोमांस हटाउनुहोस् र स्लाइस गर्नु अघि १ minutes मिनेट पहिले आराम दिनुहोस्। आलु, गाजर र बन्दकोबीको साथ सेवा गर्नुहोस्।
एक पटक पकाएपछि तपाइँको मासु गोमांस कोमल हुनुपर्छ (मेरो सामान्यतया १० घण्टाको समय नजिकै पकाउँदछ)। उपकरणहरू फरक हुन सक्दछ, यदि तपाइँको मासु गोमांस कोमल छैन भने, यो अधिक लामो खाना बनाउन को लागी आवश्यक छ। अन्नमा तपाईको पोखिएको मासु काट्नु आवश्यक छ। प्रदान गरिएको पोषण जानकारी एक अनुमान हो र खाना पकाउने विधिहरू र प्रयोग गरिएको सामग्रीको ब्रान्डमा फरक हुनेछ।
क्यालोरिज:22२,कार्बोहाइड्रेट:32g,प्रोटिन:39g,मोटो:4g,पागलिएको बोसो:१०g,कोलेस्ट्रॉल:१२२मिलीग्राम,सोडियम:२17१मिलीग्राम,पोटासियम:१553मिलीग्राम,फाइबर:।g,चिनी:6g,भिटामिन ए:45 3545IU,भिटामिन सी:१66.।मिलीग्राम,क्यालसियम:१55मिलीग्राम,फलाम:.5।।मिलीग्राम
कीवर्डमसालेको गाई र गोभी कोर्सबेलुकाको खाना पकाइयोअमेरिकी© SpendWithPennies.com। सामग्री र फोटोग्राफहरू प्रतिलिपि अधिकार सुरक्षित छन्। यस नुस्खाको साझेदारीलाई दुवै प्रोत्साहन र सराहना गरिन्छ। कुनै पनि सामाजिक मिडियामा पूर्ण रेसिपीहरू प्रतिलिपि गर्न र / वा टाँस्न कडा निषेधित छ। कृपया यहाँ मेरो फोटो प्रयोग नीति हेर्नुहोस् ।
यो ढिलो कुकर रेसिपी गर्नुहोस्
रुबेन स्यान्डविच स्लाइडर्स
आयरिश पब शैली Nachos